Yudonpay ဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများရယူခြင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည် Androidsis ပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | Android application များ
ငါ့ကိုယ်ငါလိုပဲမင်းမှာသစ္စာရှိကတ်တွေအများကြီးရှိတယ် (အထည်မျိုးစုံ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ များသောအားဖြင့်စတိုးဆိုင်များမှ ၀ ယ်သောအဝတ်အစားစတိုးဆိုင်များမှ) ငါသေချာတယ်။ သူတို့နဲ့သင်နိုင်တယ် သီးသန့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာမှအကျိုးခံစားခွင့် သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုသင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့သယ်ဆောင်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖို့ငါပြောတောင်မပြောဘူး။
Yudonpay ဒါကအခမဲ့ app ပါ ၎င်းတို့အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဖြင့်မင်းအတွက်သုံးရတာပိုလွယ်ကူစေသောအမှတ်ကတ်စနစ်ကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်လိုက်သည်။ အသစ်သော update နှင့်အတူယခုသင်လုပ်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည် အံ့သြဖွယ်လက်ဆောင်များအတွက်သင်၏အမှတ်များကိုရွေးပါ.
1 Yudonpay တွင်သင်၏သစ္စာရှိကတ်များအားလုံး
2 Yudonpay ဈေးသစ်
စပိန်မှာငါတို့ကသစ္စာရှိအသင်းတွေရဲ့တကယ့်ပရိတ်သတ်တွေပါ။ Nielsen ကုမ္ပဏီမှမကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရစပိန်၌ဤအပလီကေးရှင်းကိုသုံးခြင်းသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဥရောပပျမ်းမျှ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းထက်၎င်းနှင့်ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှထက်နှစ်မှတ်မြင့်သည်။ ကလပ်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏စည်းမျဉ်းများ၊ လည်ပတ်ပုံနှင့်၎င်း၏ကဒ်တို့ရှိသည်။ ဤအရာများအားလုံးသည်တစ်ခါတစ်ရံမှန်ကန်သောကဒ်ကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ရနိုင်သောအားသာချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ခက်ခဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရင်ဆိုင်ရကြောင်း၊ Yudonpay သည်သင်၏သစ္စာရှိကတ်များအားလုံးကို app တစ်ခုတည်း၌စုစည်းသည်သို့မှသာအခက်အခဲမရှိဘဲရနိုင်သောအားသာချက်များအားလုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်ပါသည်။
Yudonpay ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် ကလပ် ၁၇၁ ခုအထိချိတ်ဆက်ပါ Travel Club, Kiaki, Vips, Cinesa, Game, BP, Renfe, Rakuten, Iberia, Fnac တို့အပြင်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ထို့ပြင်သင်၏အချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်စုံစမ်းရန်အခြားကလပ် ၇၂ ခုကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင် သုံး၍ ရရှိမည့်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်စိတ်ကူးပြီးသားဖြစ်နိုင်သည် Yudonpay သင်၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၊ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၊ ဒါကလုံးဝအခမဲ့ပါမရ။ သို့သော်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် update နှင့်အတူ Yudonpay သည်သင့်အားစွဲဆောင်နိုင်မည့် feature သစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သင်၏လက်ဆောင်များကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်ပါ.
Yudonpay သည်အသုံး ၀ င်သော၊ အသုံးဝင်သော၊ အလိုလိုသိသောဒီဇိုင်း၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကဏ္aspectsများဖြစ်နေသည်။ ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေသော app တစ်ခုမရ။ သို့သော် version 2.0 သည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည်သင်အမြဲအနည်းငယ်ပိုကောင်းနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသဘောအရ Yudonpay ဗားရှင်းအသစ်သည် star feature တစ်ခုအဖြစ်“ marketplace” လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ ဒါကအပိုင်းအသစ်ပါ ကလပ်တစ်ခုစီနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ ကတ်တလောက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပြသသည် သင်ပိုင်သောအရာ ဤနည်းအားဖြင့်သင်လုပ်လိုသမျှသည်သင်လိုချင်သောထုတ်ကုန်ကိုအမှတ်အသား ပြု၍ Yudonpay ကို သုံး၍ လိုအပ်သောအချက်များကိုဆက်လက်စုဆောင်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်အမှတ်များရရှိသည်နှင့်သင်၏လက်ဆောင်ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်စုဆောင်းထားသောအမှတ်များကိုကြည့်ရန်၊ သင်လိုချင်သောထုတ်ကုန်ကိုရရှိရန်အားနည်းသောအရာများ၊ ကက်တလောက်ကိုအဆက်မပြတ်တိုင်ပင်နေစရာမလိုတော့ပါ။ ကဲ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအနေနှင့်သင်အောင်မြင်သည်အထိအမှတ်များစုဆောင်းသည်မရ။ အရမ်းလွယ်တယ်မဟုတ်လား။
သိသာထင်ရှားသည်မှာဤအရာသည် Yudonpay ဗားရှင်း 2.0 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာသည့်တစ်ခုတည်းသောအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော optimization လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ထပ်အသစ်အဆန်းများကိုပေးသည်။
ကန ဦး မှတ်ပုံတင်ခြင်း-၀ င်ရောက်ခြင်းမျက်နှာပြင်၏ပိုမိုရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသစ်
အသစ် ပိုက်ဆံအိတ်ဒီဇိုင်း သင်ထည့်ထားသောကဒ်များမှ
အလေးအနက်ထား! မင်းရဲ့သစ္စာရှိမှုကတ်တွေကိုသုံးဖို့ပိုလွယ်စေပြီးအခမဲ့ပရိုမိုးရှင်းနဲ့လက်ဆောင်တွေရအောင်ကူညီပေးတယ်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ Yudonpay ကို Google Play တွင်အခမဲ့ download လုပ်ပါ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Yudonpay လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုရယူခြင်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်
Carlos Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ဒီ app ကငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါသံသယမရှိစမ်းကြည့်မယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးလာမည့် Samsung Galaxy A5 နှင့် A7 2018 ၏ရုပ်ပုံများကိုပထမဆုံးထုတ်ပေးသည်
Qualcomm တွင်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်သော 5G modem ရှိသည်